"Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao : tonga tetỳ ambonin’ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin’ireny izaho no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko..." 1 Timoty 1:15,16
Hoy ny evanjelista Billy Graham nitantara ny niovany fo: “Enina ambin’ny folo taona aho no nasaina namana iray hihaino mpitoriteny izay tompon-daka ara-panatanjahantena taloha. Izany no nandresy lahatra ahy, saingy malina aho ka nipetraka teny aoriana indrindra. Liana aho hihaino azy satria nihevitra hatramin’izay fa ny fivavahana dia natao ho an’ny osa, ny beantitra ary ny zazavavy be fihetseham-po, fa tsy ho ana tompon-daka amin’ny “base-ball”.
Teny antenatenan’ny toriteny dia noheveriko fa nanondro ahy izy : “Ry tovolahy, hoy izy, mpanota ianao”. Niezaka niafina tao ambadiky ny lamosina ben’ilay olona nipetraka teo anoloako aho, ary nieritreritra hoe : “Tsy ratsy noho ny hafa aho”. Fa ilay mpitoriteny kosa nanambara ilay Tenin’Andriamanitra hoe: “Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” (Romana 3:23). Rehefa nangatahin’ilay evanjelista ho eny anoloana ireo izay te hanatona an’i Kristy, dia niolomay aho nivoaka ka nihazakazaka nody.
Tsy hohadinoko mihitsy ny ady taorianan’izany. Ny ampitso aho dia niverina tany amin’ilay fivoriana. Tamin’io andro io kosa dia teny aloha aho no nipetraka. Nitsangana ilay mpitoriteny ka nanao hoe: “Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” (Romana 5:8). Hoy aho anakampo: “Mpanota aho, tia ahy Andriamanitra”. Rehefa nangatahin’ilay evanjelista ho eny aloha ireo mpihaino azy, dia anisan’ireo voalohany aho. Nandray tanana ilay mpitoriteny aho ary nanolotra ny foko ho an’i Jesosy. Nameno ny foko ny fifaliana, ny fiadanam-po, ny fahazoana antoka fa voavonjy, ary tsy niala tamiko intsony.”